Qorshaha Aqalka Cad ee nukliyeerka Sacuudiga oo baadhitaan galay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Qorshaha Aqalka Cad ee nukliyeerka Sacuudiga oo baadhitaan galay
Dawladda Maraykanka ayaa ku degdegaysa in ay macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan tiknoolajiyadda quwadda korantada ee nukliyeerka la wadaagto Sacuudi Carabiya, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saareen aqalka wakiillada.
Guddigan aqalka uu xisbiga Dimuqraadigu hoggaamiyo ayaa billaabay baaritaan ku aadan walaaca laga qabo in Aqalka Cad uu boqortooyada Sacuudiga ka dhiso warshad quwadda korontada ka dhalisa nukliyeer.
Dadka sirtan dusiyay ayaa guddiga u sheegay in arrintaasi waxyeelayn karto Bariga Dhexe ayna siyaadinayso nukliyeer samaysashada.
Shirkado lala xiriiriyay madaxweynaha ayaa lagu soo warramayaa in ay dabada ka riixayaan wareejinta macluumaadkaas.Warbixinta guddiga dusha kala socoshada ee Aqalka Wakiillada ayaa xustay in baaritaankan “uu muhiim yahay maadaama oo ay u muuqato in ay socoto qorshaha ay dawladda Maraykanku ay macluumaad xasaasi oo tiknoolajiyadda nukliyeerka ku saabsan kula wadaagayso dawladda Sacuudi Carabiya.”
Trump ayaa Aqalka Cad kula kulmay qolyaha quwadda nukliyeerka sameeya 12 Feebaraayo, si uu ugala hadlo warshado loo dhisayo dalal Bariga Dhexe ku yaalla oo Sacuudigu ka mid yahay.
Wiilka uu sodogga u yahay Trump oo la taliye u ah Aqalka Cad ayaa lagu wadaa in uu bishan safar ku maro Bariga Dhexe.
La taliye Jared Kushner
Dawladda Sacuudiga ayaa sheegtay in ay u baahantahay quwadda korontada ee Nukliyeerka laga dhaliyo si ay wax uga qabato baahida sii kordhaysa ee korontada.
Balse walaacan waxaa qayb ka ciyaara in Iiraan oo ay is hayaan ay samaysanayso tiknoolajid dhanka nukliyeerka ah, sida ay ku warramayaan warbaahinta Maraykanka.
Wadahadal hore oo ku saabsanaa tiknoolajiyadda nukliyeerka Maraykanka ayaa dhammaaday ka dib markii uu Sacuudigu diiday in uu galo heshiis ku saabsan in teknoolajiyaddaan aan hub ahaan loo adeegsan doonin, balse waxaa laga yaabaa in maamulka Trump uusan daruuri u arkin heshiiska noocaas ah, sida uu ku warramay ProPublica.
Dadka arrintan dhaliishan ayaa sheegaya in haddii Sacuudiga la siiyo tiknoolajiyadda nukliyeerka ee Maraykanka ay arrintaasi horseedi karto loolan halis ah oo dhanka hubka ah oo ka dhaca gobolkaas aan daganayn.
Previous articleSafiirka Somaliland Ee Itoobiya Oo Ka Hadlay Guddi Midawga Afrika U Saaray Arinta Somaliland Iyo Mashruuca Berbera Corridor.
Next articlemadaxtooyada somaliland oo war buuxa kasoo saartay cida uu la kulmayo madaxawayne biixi